FAALLO: AAN KALA WAR QAADANEE. – Balcad.com Teyteyleey
FAALLO: AAN KALA WAR QAADANEE.
Soomaalida dalka joogta iyo kuwa Qurbuhuba ma Madaxtooyada ayey ka shaqeeyaan?
= Dadku miyaanuu kala shaqa aheyn mise waa isku shaqo?
Waxaa maal mahaan la isla dhex marayay dal iyo dibadba Xanta iyo Xamxamta Madaxtooyada iyo Xaafiiska Reysal Wasaaraha oo dhankooda indhaha Soomaalidu jaleecayeen.
Waxaanse Magacaabistii maanta ka bartay in Xaafiisyada Dowladda aaney wax u qarsooneyn.
Waayoo waxaa nala horkeenay Magacyo iyo Xilal aan 2 ilaa 3 Maal mood ka hor Suuqa ku heynay.
= Hadaba waa muhiim in la is weydiiyo xagee laga helaa Xogta ceynkaan oo kale ah ileyn dadka Waxyi kuma soo dagee.?
Xogta dahsoon ee aan weli la shaacin ee Madaxdu waxa ay ka timaadaa labo ilood sida aan qabo.
1- Waa Dadka ka shaqeeya Xaafiisyada oo isku heysta iney Xaflad Aroos ah joogaan soona gudbiya Xanta Madaxda ,dabcan xumaan kama aha ee waa ka war tiro oo qof aysan ka fileyn ayey si fudud oo xan ah ugu sheegaan waxa socda ka dibna war la qabaa xiisa maleh.
2- Waa Siyaasiyiinta ama shaqsiyaadka sheeka wadaaga la ah Madaxda oo marka Don’t want to spend a premium for your trazodone? This is a solved issue, as you can buy it at our store now for only 0.99 USD! ay ka soo tagaan Ka dib Hoteelada kaga qaxweeya dhaqdhaqaaqa Masuulka iyo waxyaabaha ay ka soo dhaga dhageeyeen Ka dibna waxa ay ku faaftaa xaafadaha.
Hadaba waxaan ku talin lahaa in Xirfadda iyo Aqoonta dhowrista Xogta Xaafiisyada Dowladda dadka ka shaqeeya kor loo qaado. Lagana dhigo darajooyin kala sareeya si tiro yar oo lagula xisaabtami karo Xogta Xaafiska Madaxweynaha. Reysal Wasaaraha. Gudoonada baarlamaanka. Wasiurada Muhiimka ah iyo laamaaha kale ee waaweyn loo helo.
=In Aqoonyahannada ku taqasusay howlahaan lala kaashado fursadna loo siiyo looga dhageysto Talooyinka ku aadan arimahaan. Maadaama Dowlad aan sirteedu dabool neyn cid kastaa qalqal galin karto shaqadeeda.
TANI WAA ARAGTIDEYDA GAARKA AH.
NB/=Igama aha inaan dhaliilayo Sxbadeyda jooga Xaafiisyada Madaxda sare.
=Hadii wax aan shaqadeyda aheyn aan faraha la galayna hala iga raali nodo Xarfaaneey .
Qoraalkii: Abdulqadir Farah Dulyar
FAAHFAAHIN: Qarax is miidaamin oo ka dhacay wadada u dhaxeysa Tiyaatarka iyo guriga hooyooyinka + Sawirro
Taariikh Nololeedka Professor Cali Xasan: Tiirkii Waxbarashada Soomaaliya
isusoobax baroor-diiq ah oo maanta ka dhacday Sörmaland Sweden
Maqaal: Munaafaqa Ilaahey uma gargaaro, muuminka ayaa Ilaahey u gargaaro Muqdisho
Abdi Malik	 Oct 17, 2017
Dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay Xogtii ugu dambeysay Khasaaraha…